तालिबान शीर्ष कमाण्डर मारिए, राजधानी काबुलमा भिडन्तजारि - jagritikhabar.com
तालिबान शीर्ष कमाण्डर मारिए, राजधानी काबुलमा भिडन्तजारि
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेको सैनिक अस्पतालमा मंगलबार भएको विष्फोट पछि भएको भिडन्तमा तालिबानका एक शीर्ष कमाण्डर पनि मारिएका छन्। तालिबानका अधिकारीहरुले आफ्ना शीर्ष कमाण्डर मारिएको पुष्टि गरेका छन्।
मारिएका तालिबान सरकारको काबुल मिलिट्री कर्प्सका प्रमुख हमदुल्लाह मुखलिस हक्कानी नेटवर्कका सदस्य थिए। हमदुल्लाह तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएपछि मारिने सबैभन्दा उच्च पदका अधिकारी हुन्।
तालिबानी अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएअनुसार सरदार दाउद खान अस्पतालमा आक्रमण भएको सूचना पाएपछि हमदुल्ला मुखलिस तत्काल घटनास्थल पुगेका थिए। अस्पतालमा विद्रोहीसँगको लडाइँमा उनी मारिएका हुन्।
अस्पतालमा मंगलबार भएको ष्यिफोटमा कूल १९ जना मारिएका छन्। तालिबानको विपक्षी गुट इस्लामिक स्टेट खुरासानले यसको जिम्मेवारी लिएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रणपछि आइएस–के निकै आक्रामक भएको छ।
र कैयौं ठूला आक्रमण गरिसकेको छ। अस्पतालमा भएको आक्रमण ५ जनाले गरेको आइएसले जनाएको छ। तालिबानका अनुसार आक्रमणको १५ मिनेटमा सुरक्षा बलले सबै आक्रमणकारीलाई मारेको थियो।
अफगानिस्तानमा अर्को भयानक युद्ध सुरु: हर केही दिनमा अफगानिस्तानको पूर्वमा बसेको जलालाबाद सहरको बाहिरी क्षेत्रमा सडकका किनारामा लाशहरु देखिइरहेका छन् । कसैलाई गोली मारिएको थियो भने कसैलाई फाँसीमा झुण्ड्याइएको छ ।
कैयौं मानिसहरुको टाउको काटिएको छ । यीमध्ये कैयौं शवको साथमा हातले लेखिएका नोटहरु राखिएका छन् जसमा लेखिएको छ कि यिनीहरुको सम्बन्ध इस्लामिक स्टेट (आइएस)को अफगानिस्तान शाखासँग थियो ।
यी ती गैर न्यायिक र बर्बर हत्याहरु हुन् जसको अहिलेसम्म कसैले जिम्मेवारी लिएको छेन । तर, मानिएको छ कि यी हत्याहरुको लागि तालिबान जिम्मेवार छ । आइएस तालिबानको कट्टर विरोधी मानिन्छ । यही वर्ष अगष्ट महिनामा आइएसले राजधानी काबुलमा रहेको एयरपोर्ट बाहिर आत्मघाती आक्रमण गराएको थियो जसमा १५० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यी दुई समूह अब एक खुनी संघर्षमा अल्झिएका छन् जसको आँच जलालाबादमा महसुस गर्न सकिन्छ । तालिबानको विद्रोह समाप्त भएपछि अहिले अफगानिस्तान अधिक शान्तिपूर्ण छ। तर, जलालाबादमा स्थिति अलग छ । यहाँ लगभग दैनिकजसो दुवै समूहका लडाकुहरुले हमलाको सामना गर्नु परिरहेको छ।
आइएस जसलाई स्थानीय स्तरमा मानिसहरु ‘दाएश’ भन्छन्, उसका लडाकुहरु हमला गरेर लुक्ने रणनीतिको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसअघि अफगानिस्तानको पूर्व सरकारमाथि हमला गर्नको लागि तालिबान सफलतापूर्वक यस्तै किसिमको रणनीति अपनाइसकेको छ जसमा सडकको किनारामा बम राख्न र लुकेर हत्या गर्नु सामेल छन्।
इस्लामिक स्टेटको आरोप छ कि तालिबान ‘विश्वासघाती’ हो किनकि ऊ इस्लामका विषयमा कट्टर छैन। अर्कोतर्फ तालिबान आइएसमाथि विधर्मी र चरमपन्थी भएको आरोप लगाउँछ। जललाबाद सहर नांगरहार प्रान्तमा छ जहाँको तालिबानका खुफिया प्रमुख डाक्टर बशीर हुन् । डाक्टर बशीर आफ्नो कडा व्यवहारका लागि परिचित छन्।
यसअघि उनले कुनारमा आइएसले बनाएको गढबाट उसलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गरेका थिए। डाक्टर बशीरका अनुसार सहरबाहिर सडक किनारामा मानिसहरुलाई देखाउनको लागि राखिएका शवहरुसँग तालिबानको कुनै सम्बन्ध छैन। यद्यपि उनी गर्वसँग भन्छन् कि उनका लडाकुहरुले इस्लामिक स्टेटका दर्जनौं सदस्यहरुलाई समातेका छन्।
जतिबेला तालिकान अफगानिस्तानमा कब्जा गरिरहेको थियो त्यतिबेला फैलिएको अस्तव्यस्ततामा जेलमा थुनिएका इस्लामिक स्टेटका कैयौं लडाकु भागेका थिए। सार्वजनिक रुसमा तालिबान र डाक्टर बशीर इस्लामिक स्टेटको खतरालाई कम देखाएर बताउँछन्
उनहिरुको भनाइ छ कि अफगानिस्तानमा युद्ध अब समाप्त भइसकेको छ र उनीहरु देशमा शान्ति र सुरक्षा ल्याउनेछन् र तालिबानको यो उद्देश्यलाई जसले कमजोर पार्छ त्यो स्वीकार्य छैन। अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेटविरुद्ध कैयौं प्रमाण हुँदाहुँदै पनि डाक्टर बशीर दावी गर्छन् कि देशमा औपचारिक रुपमा इस्लामिक स्टेटको उपस्थिति छैन।
उनी भन्छने ‘दाएश नामले सिरिया र इराकतर्फ इशारा गर्छ । यहाँ अफगानिस्तानमा दाएश नामको कुनै यस्तो विद्रोही समूह छैन ।’ उनी भन्छन् कि उनी यी लडाकुहरुलाई ‘विश्वासघातीहरुको यस्तो समूह मान्छन् जसले इस्लामिक सरकार विरुद्ध विद्रोह गरेका छन्। तर, वास्तविकतामा आइएस अफगानिस्तानमा उपस्थित मात्र छैन।
उसले देशको प्राचीन नामको प्रयोग गर्दै यहाँको लागि आफ्नो अलग शाखा नै बनाएको छ जसको नाम हो इस्लामिक स्टेट खुरासान। यो समूहले सबैभन्दा पहिले २०१५ मा आफ्नो उपस्थिति देखाएको थियो र त्यसपछिका वर्षहरुमा घातक आक्रमणहरु गरिरहेको छ।
तर, तालिबान एक पटक फेरि सत्तँमा आएपछि यो समूहले यस्ता इलाकामा आत्मघाती आक्रमण गर्न सुरु गरेको छ जहाँ उसका लडाकु पहिले कहिल्यै जाँदैनथे । यो महिनाको सुरुवातमा इस्लामिक स्टेटले देशको उत्तरमा बसेको कुंदुज सहरमा शिया अल्पसंख्यक समुदायका मस्जिदहरुमा र तालिबानको गढ मानिने कंधारमा आक्रमण गरेको छ।
डाक्टर बशीर भने जोड दिएरै चिन्ताको कुनै कुरा नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हामी विश्वसँग यही भन्छौं कि चिन्ता नगर्नुस् । यदि विश्वासघातीहरुको एउटा सानो समुहले टाउको उठाउँछ र यस किसिमका आक्रमण गर्छ भने .. अल्लाहको इच्छा रह्यो भने जसरी हामीले लडाइँको मैदानमा ५२ देशको गठबन्धनलाई हराएका थियौं, यिनीहरुलाई पनि हराउनेछौ ।
२ दशकसम्म अफगानिस्तानमा विद्रोहमा सहभागी रहेका डा. बशीर भन्छन् ‘हाम्रो लागि गुरिल्ला युद्धलाई रोक्नु सजिलो हुनेछ ।’ तर वर्षौंसम्म युद्ध र रक्तपात देखिसकेका अफगान, पश्चिमी देश र अफगानिस्तानका छिमेकी इस्लामिक स्टेटको विस्तार देखेर चिन्तित छन् ।
अमेरिकी अधिकारीले पहिले नै अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेट अन्य देशमा आक्रमण गर्नको लागि ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र तयार हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्। अहिलेलाई इस्लामिक स्टेटले अफगानिस्तानको कुनै पनि इलाका कब्जा गर्न सकेको छैन।
यसअघि आइएसले नांगरहार र कुनार प्रान्तमा आफ्नो बेस बनाएको थियो तर तालिबान र अमेरिकी हवाइ आक्रमणको सहयोगमा अफगान सेनाले उनलाई यहाँबाट बाहिर भगाएको थियो । तालिबानको तुलनामा अहिले यो समूहमा निकै कम लडाकु छन्।
जहाँ तालिबानसँग ७० हजार लडाकु छन् र उनीहरु अमेरिकी हतियारले सुसज्जित छन् त्यहीँ आइएसका लडाकुको संख्या केही हजारमा खुम्चिएको छ।
तर, आइएसले देशमा रहेका अन्य केन्द्रीय एसिया र पाकिस्तानी विदेशी लडाकुलाई आफ्नो सदस्य बनाउन सक्ने डर व्यक्त गरिएको छ । साथै डर यो पनि छ कि भविष्यमा तालिबानका सदस्यहरुमा आपसी मतभेद भयो र यो समूह विभाजित भयो भने असन्तुष्ट सदस्य आइएसको पक्षमा जान सक्छन्।
अमेरिकालाई इस्लामिक स्टेटलाई निशाना बनाउन अफगानिस्तान बाहिरबाट हमला जारी राख्न सक्छु भन्ने विश्वास छ । तर, यो मामिलामा तालिबान उत्साहित छ र ऊ एक्लै विद्रोहीहरुसँग लड्न सक्छु भन्ने मान्छ।
इस्लामिक स्टेटका कैयौं सदस्य समूह छोडेर तालिबान र पाकिस्तान तालिबानमा मिसिएका छन् । पाकिस्तान तालिबान तालिबानसँग सम्बन्धित समूह हो तर ऊभन्दा अलग हो । तालिबानका एक अधिकारीले मुस्कुराउँदै भने ‘हामी उनीहरुलाई राम्रोसँग चिन्छौं र उनीहरु पनि हामीलाई राम्रोसँग चिन्छन् ।’
हालका दिनमा नांगरहारमा आइएसका दर्जनौं लडाकुले डा. बशीरका सैनिकको अगाडि आत्मसमर्पण गरेका छन् । यीमध्ये एक जो पहिले तालिबानमा थिए उनले इस्लामिक स्टेटमा सहभागी भएपछि आफ्नो मोहभंग भएको बताए ।
उनी भन्छन् ‘जहाँ तालिबान यो कुरामा जोड दिन्छ कि उसको उद्देश्य अफगानिस्तानमा ‘इस्लामिक अमिरात’ कायम गर्ने हो, त्यहीँ इस्लामिक स्टेटको चाहना वैश्विक स्तरमा फैलिने छ। उनी भन्छन् ‘आइएस विश्वभरमा सबैको लागि खतरा हो।
ऊ पूरै संसारमा आफ्नो शासन चाहन्छ । तर, उसले भन्ने र गर्नेमा फरक छ । ऊ यति शक्तिशाली छैन कि अफगानिस्तानमा कब्जा गर्न सकोस्। कैयौं अफगान नागरिक आइएसको बढिरहेको आक्रमणलाई देशमा एक नयाँ खेलको सुरुवातको रुपमा हेरिरहेका छन् ।
जलालाबादमा केवल तालिबानलाई मात्र निशाना बनाइएको छैन । यो महिनाको सुरुवातमा सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल रहमान मावेन एक बिहेमा सहभागी भएर घर फर्किंदा उनको कारमा आक्रमण भयो । उनका दुई छोरा लुके तर अब्दुललाई गोली हानियो । यो हत्याको जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेटले लियो।